भीआईपीको सादगी - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
टाइम्स स्क्वाएर र थिएटर डिस्ट्रिकको लोकेशन । बुधबार सप्ताहको मध्याह्न । कर्पोरेट अफिसहरूको लन्च हुने दिन । मोर्गान स्टेन्लीको चकाचक । सारा भारतीयहरू कर्पोरेट लन्च स्तरीय देशी रेस्टुराँमा नै खान मन पराउने भएकाले । सहकर्मीहरूसँग लाइन लागेर आउँथे । बिना रिजर्भेसन टेबल फर टेन र फिप्टिन भन्दै दर्जनौं टोली घुस्थे । सर्भरको अण्डर गार्मेन्ट्स ननिचोरिएको कमै दिन हुन्थ्यो होला ।
मध्य लन्चको मारामारमा एक रिजर्भ टेबल, आलाकार्ट खान घुस्दा सर्भरहरू नतमस्तक हुन्थे । भान्सादेखि बारसम्म चिटचिहाट हुन्थ्यो । एकोहोरो कामको लगाव बिथोलिन्थ्यो । चार जना साधारण मानिसहरू थिए । एउटाले मेनु समात्यो र फटाफट अर्डर ग¥यो । तीन एपिटाइजर, तीन मेनकोर्ष र सफ्ट ड्रिङ्स सामान्य टेबल थियो । सबै बसर तथा सर्भर व्यस्त थिए । भीभीआईपीको कुनै छनक थिएन न त सुरक्षा गार्ड ।
सामान्यतया सिने स्टार्सहरू आउँदा उनीहरूको गोप्यता धेरैले थाहा नपाओस् जस्तो गर्छन् । तर, भित्रभित्र पहिचान, एटेन्सन र तारिफ हरेक मान्छेले सोच्छ नै ।
फ्लोर इन्चार्जहरूको नियमित कर्म र धर्म नै हुन्छ । मेनेजमेन्ट वा बोसहरूलाई भीभीआईपीबारे जानकारी दिनु । तर, कहिलेकाहीँ बोसहरूको अप्रत्याशित व्यवहारले सर्भिङ नै तहसनहस बनाइदिन्छ । प्रचारस्वरूप वा हार्दिकता, आभार र कृतज्ञतास्वरूप एक दुई चिज निःशुल्क कम्लिमेन्ट्री दिनु सर्भिस क्षेत्रको कल्चर हो ।
एक सामान्य नियमित ग्राहक बनेर लन्च सकाएपछि भीआईपीहरूलाई जापानी ओसिपुरी, हट टावल्स दिइयो । उनीहरू खुशी भए । फलुदा आइसक्रिम र होममेड श्री खण्ड टेस्टिङ डिसर्ट कम्लिमेन्ट्री सर्भ गरिन्छ । सबैले कृतज्ञता दिन्छन् । अन्त्यमा बिल मगाइयो । लन्च सकिएपछि उसले विनम्रतापूर्वक आफू उहाँको फ्यान भएको र एउटा अटोग्राफका लागि अनुरोध गर्छ । भीआईपी उठ्छन्, नजिकै अँगालो मार्छन्, सँगै अर्कोले आइफोन समातेर क्लिक मारिदिन्छन् । हातबाट केओटी प्याड समातेर थ्याङ्क्यू फर इभ्रिथिङ एन्ड योर फ्याबुलस सर्भिस बिल गेट्सको साइन हुन्छ ।
भिडबाट छलिएर उनीहरू साइड ढोकाबाट बाहिर निस्कन्छन् । एक दुई जना भिडबाट चिच्याउँछन् । बिल गेट्स था क्या ? वो देखो बिल गेट्स गया ।
एकाएक सबै बिल गेट्स बसेको टेबलमा बसेर फोटो लिन्छन् । सबैले उसलाई सोध्छन् क्या खाया ?
अफिसमा गएर केओटी प्याडको फोटो कपि गरेर भान्साको नोटिस बोर्डमा टाँसिदिन्छ । सबै जना फोटो लिन नपाएकोमा चुकचकाहट गर्छन् । कोही रिसाउँछन् । बिदामा बसेको मेनेजरको फोन आउँछ । मैले आज किन छुट्टी लिएको होला !
एक सामान्य र सादगी मानिस सामान्य खाना खाएर बाहिरिन्छ । सहरभरि हल्ला फैलिन्छ बेलुकी झन् भिड थपिन्छ । पापाराजीहरू बाहिरबाट झ्यालतिर आँखा लगाउँदै बिल गेट्स बसेको झ्यालको फोटो लिन्छन् । ऊ सामान्य ग्राहकसरह १८ प्रतिशत टिप्स दिने अर्को टेबलको प्रतीक्षामा रहन्छ ।
जिन्दगीको एक दिन र एक पाना पल्टिएझैं टेबलपोष्ट फेरिइन्छ । कपडामा लागेको पहेंलो दाग ब्लिच दलेर मेटिएजस्तै भीआईपीको स्मृति मेटिन्छ । तर, एक सफल मान्छेको सादगीले उसलाई थप काम गर्ने हौसला मिल्छ ।